Kurwa kuri kurambidzwa - Wwe
Zvinogona kutaridza sekusanzwisisika kune vamwe kuti kukwikwidza kwepro, kunoenderana nevakakunda zvisati zvaitika uye zvinyorwa, zvingadai zvakarambidza kufamba.
Kutarisa zvakadzama pachinhu ichi kunotungamira kumhedziso yekuti kune, yakawanda yenguva, zvikonzero zvakanaka zvekutamisa uku kurambidzwa. Dzimwe nguva inyaya yekutama kune njodzi, uye inokonzeresa kukuvara kune mumwe kana vese vanoita.
Dzimwe nguva, danho iri rinogona kuverengerwa nemunhu ane nharo mune zvemitambo varaidzo, kana kuumba gakava iro vanosimudzira vanoshuvira kudzivirira.
Kwemakore aya pakave nekufamba kwakawanda kwakarambidzwa nemisangano yewrestling. Heano manomwe evakakurumbira.
# 7 Iyo Piledriver (Yechinyakare)
Hulk Hogan mumachira aPaul Orndorff's piledriver.
Iyo piledriver kufamba kune misiyano yakawanda. Iko kune yakasarudzika piledriver, iyo inosanganisira kungogara pasi neshure nemupikisi wako akachinjika.
Ikozve kune yakakwira spike piledriver, yakaitwa mukurumbira naMnu Wonderful Paul Orndorff, iyo inosanganisira yekukwakuka kufamba. Terry Funk akaita mukurumbira vhezheni inonzi inomhanya Piledriver uko kwaakatora matanho akati wandei asati aendesa. Jerry Lynn akashandisa cradle piledriver iyo yaitaridza hutsinye vese pavanobuda.
Mazuva ano, echinyakare piledriver, uko munhu anoisa dumbu rake kumunhu waakabata kumusana, anenge asingaoneke.
Nei kufamba kwakarambidzwa: Vazhinji varwi vakakuvara nekufamba, kunyanya (uye zvinoonekwa) Dombo Cold Steve Austin.
Ndiani akarambidza kufamba uku: Iyo WWE yakarambidza zvese piledriver misiyano muna 2000, ichitsanangura kuchengetedzeka kunetsekana. Undertaker naKane vakave 'vazukuru,' zvichireva kuti vaibvumidzwa kuramba vachishandisa danho sezvo raive siginecha uye ivo vairishandisa pasati pabhanwa.
Kukwidziridzwa kwakawanda kwakazvimirira hakurambidze mutyairi asi kunokanganisa mashandisirwo ayo kunze kwevamwe vevanokwikwidza. Sezvineiwo, Ring of Honor inobvumidza ese mavhezheni ePilesriver, asi kunyangwe iko iko kushandiswa kwacho hakuwanzoitika.
ndinofanira kudanana nemumwe munhu wandisingafarire
zvaunoita kana ur bored
zvinonakidza chokwadi nezvako kugovana
kuwana mufaro muwanano yakaipa
iro rima divi rekuve empath
vanhu havandide uye handizive kuti sei